Gerard Butler xidigii ololaha cusub ee Hugo Boss | Ragga Stylish
Gerard Butler xiddigga ololaha cusub ee Hugo Boss
Fasal yeesho | | nololeedka, Goobo
Ka dib in ka badan 15 sano oo guul ah, Hugo Boss wuxuu ku guuleystay inuu qeexo ninka maanta isagoo ku dhawaaqaya in tani ay ku jirto waqtigeedii ugu fiicnaa ee taariikhdeed. Wuxuu aaminsan yahay in isku dhafka astaamahiisa casriga ah iyo cusbooneysiinta astaamaha ragga - sida geesinimada iyo geesinimada - ay ka dhigaan ragga maanta ugu fiican ilaa taariikhda.
Safiirkiisa cusub waa jilaaga Gerard Butler. Marxaladdan udgoonku wuxuu doonayaa inuu matalo xoogga, chivalry, soo jiidashada iyo kakanaanta waqtiyada casriga ah. Wuxuu isku qeexaa inuu yahay nin isku kalsoon naftiisa, geesi, hammi leh iyo figrado hufan. Wuxuu raadinayaa khibrado cusub ama barashada sharciga, sameynta shaqo iskaa wax u qabso ah ama, dabcan, shaqadiisa jilitaanka.
Gerard Butler ayaa yiri: “Waan jeclahay waxa aan sameeyo, noloshaydana waxaan isku dayaa inaan baashaalo. Waxaan u arkaa naftayda qof dadaala oo dhiirigaliya, laakiin isla markaa waxaan isku dayaa inaan ixtiraamo dadka kale. Waxaan u maleynayaa inay muhiim tahay maadaama fikirka 'Man of Man' uusan kaligiis ku saabsaneyn naftiisa, laakiin sidoo kale sida uu dadka kale u dhiirrigelinayo uguna saameynayo.
In kasta oo marxalad cusubi furmayso, cadarku sikastaba ha ahaatee wuxuu kujiraa a classic weligeed ah mahadsanid carafka udgoon ee raga oo aan shaki kujirin oo leh qoraallo basbaas iyo qoryo leh oo caan ku ah SAMAYNTA BOSS. Ha moogaan bilawga ah ee uu olole cusub telefishanka laga bilaabo Oktoobar 12.
Miyaad jeceshahay cadarkan? Maxaad u malayn Gerad Butler inuu yahay maareeyahaaga cusub?
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Goobo » Gerard Butler xiddigga ololaha cusub ee Hugo Boss
Wakiilka ugu fiican gumeysigaas Waa nin qumman waad ku mahadsantahay inaad na siisay fursad aan ku raaxeysanno
Dharkeena 10ka ah ee ugu jecel
Shaati dheeri ah oo dheeri ah?